Tombony ho an'ny angovo rivotra: toetra, fampiasa ary fatiantoka | Fanavaozana maintso
Tombony azo amin'ny angovo rivotra
Portillo Alemanina | 15/07/2021 11:00 | Herin'ny rivotra
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia nanjary loharanom-pamokarana angovo lehibe hanovana ny maodelin'ny angovo, madio sy maharitra kokoa. Ny teknolojia nohatsaraina dia ahafahan'ny toeram-piompiana misy rivotra mamokatra herinaratra amin'ny vidiny ambany toy ny angovo arintany na angovo nokleary. Tsy misy isalasalana fa ny angovo atrehantsika dia misy tombony sy fatiantoka ao aminy, fa ilay teo aloha kosa nandresy tamin'ny fandresena nandresy. Ary misy maro tombony azo avy amin'ny angovo rivotra.
Noho io antony io dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny tombony lehibe entin'ny angovo rivotra entiny amin'ny fampandrosoana ny angovo eto an-tany.
3 Tombony azo amin'ny angovo rivotra
3.1 Izy io dia angovo tsy mety ritra ary manana toerana kely
3.2 Tsy mandoto sy manana vidiny ambany
4 Tombony bebe kokoa amin'ny herin'ny rivotra sy ny fihemorana
4.1 Tsy miova ny rivotra ary tsy tehirizina ny angovo
4.2 Ny fiantraikan'ny tontolo sy ny zava-boary
Ny voalohany dia ny fahalalana hoe inona izany karazana angovo izany. Ny angovo avy amin'ny rivotra dia angovo azo avy amin'ny rivotra. Izy io dia karazana angovo kinetika vokarin'ny fihetsiky ny fikorianan'ny rivotra. Azontsika atao ny mamadika ity angovo ity ho angovo elektrika amin'ny alàlan'ny generator. Izy io dia angovo madio, azo havaozina ary tsy misy loto izay afaka manampy amin'ny fanoloana ny angovo ateraky ny solika fôsily.
Ny mpamokatra angovo angovo lehibe indrindra eto an-tany dia Etazonia, arahin'i Alemana, Sina, India ary Espana. Any Amerika Latina, Brezila no mpamokatra lehibe indrindra. Any Espana, ny herin'ny rivotra dia manome herinaratra mitovy amin'ny trano 12 tapitrisa, izay maneho ny 18% amin'ny fangatahan'ny firenena. Midika izany fa ny ankamaroan'ny angovo maintso omen'ny orinasan-jiro eto amin'ny firenena dia avy amin'ny fiompiana rivotra.
Ny angovo azo avy amin'ny rivotra dia azo avy amin'ny famadihana ny fivezivezin'ny lelan'ny turbin-drivotra ho angovo elektrika. Ny turbine rivotra dia mpamorona entin'ny turbin-drivotra, ary milina fitotoana alohany. Ny turbine rivotra dia misy tilikambo; ny rafitra fametrahana dia eo amin'ny faran'ny tilikambo, eo amin'ny farany ambony. Ny kabinetra dia ampiasaina hampifandraisina amin'ny tambajotra elektrika eo amin'ny farany ambany amin'ny tilikambo; sobika mihantona dia bara izay mametraka ny ampahany mekanikan'ny fikosoham-bary ary ampiasaina ho fototr'ireo lelany; ny hazo sy ny rotor dia entina manoloana ny lelany; misy freins, multiplier, generator ary rafitra fanitsiana herinaratra ao amin'ny nacelle.
Ny lelany dia mifandray amin'ny rotor, izay mifamatotra amin'ny tsorakazo (miorina amin'ny tsato-kazo mahery), izay mandefa angovo mihodina amin'ny mpamokatra. Mampiasa andriamby ny generator mba hiteraka herinaratra, amin'izay hiteraka herinaratra elektrika.
Ny toeram-piompiana rivotra dia mamindra ny herinaratra ateraky ny ivon-toerany amin'ny fizarana fizarana amin'ny alàlan'ny tariby, ary ny angovo vokarina dia omena amin'ny tsinjara fizarana ary avy eo ampitaina amin'ny mpampiasa farany.
Betsaka ny tombony azo avy amin'ny angovo rivotra ka tsy maintsy hizarantsika azy ireo mba hahalalantsika ny antsipiriany.
Izy io dia angovo tsy mety ritra ary manana toerana kely
Loharanon-kery azo havaozina izy io. Ny rivotra dia loharano manankarena sy tsy mety ritra, izay midika fa afaka miantehitra foana amin'ny loharano angovo voalohany ianao, izay midika izany Tsy misy daty lany daty. Ary azo ampiasaina amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao.
Mba hamokarana sy hitehirizana herinaratra mitovy amin'izany dia mila tany kely noho ny photovoltaics ny toeram-piompiana rivotra. Azo avadika ihany koa izy io, izay midika fa ny faritra onenan'ilay valan-javaboary dia azo averina mora foana hanavao ny faritany teo aloha.
Tsy mandoto sy manana vidiny ambany
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia iray amin'ireo loharano angovo madio indrindra aorian'ny herin'ny masoandro. Ny anton'izany dia tsy fizotry ny fandoroana mandritra ny fizotran-janany. Noho izany dia tsy mamokatra gazy misy poizina na fako matevina izy io. Ny fahaizan'ny angovo misy turbinin'ny rivotra dia mitovy amin'ny herin'ny solika 1.000 kilao.
Ankoatr'izay, ny turbine dia manana fiainana lava be talohan'ny nanesorana azy ho nariana. Ny vidin'ny turbinina sy turbinin'ny rivotra dia somary ambany ihany. Any amin'ny faritra misy rivotra mahery, ny vidin'ny per kilowatt amin'ny famokarana dia ambany dia ambany. Amin'ny tranga sasany, ny vidin'ny famokarana dia mitovy amin'ny saribao na koa angovo nokleary.
Tombony bebe kokoa amin'ny herin'ny rivotra sy ny fihemorana
Ity karazana angovo ity dia mifanaraka amin'ny hetsika ara-toekarena hafa. Hevitra tsara ekena ireo. Ohatra, ny asa fambolena sy ny fiompiana dia miara-miaina mifanaraka amin'ny asan'ny fiompiana rivotra. Midika izany fa tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny toekarena eo an-toerana, ary mamela ny fotodrafitrasa hamorona loharanon-karena vaovao nefa tsy manelingelina ny fampandrosoana ireo hetsika nentim-paharazana.
Etsy ankilany, araka ny antenainao, tsy ny rehetra no tombony amin'ny angovo rivotra, fa misy ihany koa ny fatiantoka. Andao hofakafakaintsika tsirairay izy ireo:
Tsy miova ny rivotra ary tsy tehirizina ny angovo
Tsy azo vinavinaina ny herin'ny rivotra, noho izany ny vinavinan'ny famokarana dia tsy tanterahina foana, indrindra amin'ny fitaovana kely vonjimaika. Mba hampihenana ny risika dia maharitra hatrany ny fampiasam-bola amin'ireo fotodrafitrasa ireo ka azo antoka kokoa ny kajy ny fiverenany. Ity tsy fahampiana ity dia azo takarina tsara amin'ny alàlan'ny fampahalalana iray: turbines-drivotra afaka miasa ara-dalàna ihany izy ireo amin'ny alàlan'ny rivotra 10 ka hatramin'ny 40 km / ora. Amin'ny hafainganam-pandeha ambany, ny angovo dia tsy mahasoa, raha amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa, dia maneho risika ara-batana amin'ny rafitra.
Angovo tsy azo tehirizina, fa tsy maintsy laniana avy hatrany rehefa vokarina. Midika izany fa tsy afaka manome safidy hafa feno amin'ny fampiasana karazana angovo hafa izy io.
Ny fiantraikan'ny tontolo sy ny zava-boary
Ny fiompiana rivotra lehibe dia misy fiatraikany matanjaka eo amin'ny sehatry ny tontolo ary azo jerena lavitra be. Ny halavan'ny tilikambo / turbine dia eo anelanelan'ny 50 ka hatramin'ny 80 metatra, ary ny lelany mihodina dia atsangana 40 metatra fanampiny. Indraindray ny fiatraikany amin'ny endrika hatsarana dia miteraka tsy fahazoana aina amin'ny mponina eo an-toerana.
Ny fiompiana rivotra dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fiainam-borona, indrindra fa ny raptors izay miasa amin'ny alina. Ny vokany amin'ny vorona dia vokatry ny zava-misy ny elatra mihodina dia afaka mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 70 km / ora. Ny vorona dia tsy afaka mamantatra ireo vodin-tsambo amin'ny hafainganam-pandehany ary mifandona amin'izy ireo.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tombony azo amin'ny angovo rivotra sy ny sasany amin'ireo fihemorana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Tombony azo amin'ny angovo rivotra